PSJTV | औषधीसहित रौतहट पुगे डा. गोविन्द केसी, बाढी पीडितको स्वास्थ्य जाँच हुँदै
औषधीसहित रौतहट पुगे डा. गोविन्द केसी, बाढी पीडितको स्वास्थ्य जाँच हुँदै
रौतहट : त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी प्रदेश २ को जिल्ला रौतहट पुगेका छन् । केसी बाढी प्रभावितको स्वास्थ्य जाँच गर्न रौतहटको भावित ईशनाथ नगरपालिकाको बन्जरहा पुगेका हुन् । शुक्रबारदेखि बन्जरहाको स्वास्थ्य चौकीमा आएका डा. केसीले विरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । उनलाई स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य चौकीमा आएका एक दर्जन भन्दाबढी स्थानीयमा झाडापखाला लागेको पाइएको उनले बताए । ‘पानी पूरै प्रदूषित छ । स्थानियवासीमा झाडापखालाको लक्षण देखा परेको छ’ डा. केसीले भने, ‘शौचालयहरु अव्यवस्थित छ । खानेपानीका मुहानहरु प्रदूषित छ, अहिले नै सचेत भइएन भने महामारी फैलिन्छ ।’
बाढीबाट प्रभावित बस्तीमा झाडा पखालासँगै भाइरल ज्वरोलगायतका रोग देखापरेको उनले बताए । उता बाढी आएको नौ दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छैन ।
अकस्मात बन्जरहा आइपुगेका डा. केसीको स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बाढीको मार खेपिरहेका रौतहटका जनताहरुलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यबाट आफू रौतहट आएको डा. केसीले बताए । उनले शुक्रबार मात्र १ सय ४० जना स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ। एनजिओ र आईएनजीओको अनुगमन गर्दै आएको समाजकल्याण परिषद्लाई खारेज गर्दै सरकार एनजीओ ...
काठमाडौं : धर्मप्रति आस्था राख्नेहरू ग्रहदशा फाल्न चिडियाखाना पुग्ने गर्छन् भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्ला । भगवान गणेशको रूप मानिँदै आएको हात्तीको दर्शन गरी आहारा खुवाउँदा ग्रहदशा कट्छ भनेर हरेक मङ्गलबार ...